Ihlabene iSharks esithole uNeil Powell obenza izimanga kumaSevens
ICell C Sharks seyimemezele ukuthi uNeil Powell oqeqesha iqembu lesizwe lamaSevens uzojoyina leli qembu laseThekwini ngemuva kweNdebe yoMhlaba ngoSepthemba.
Ngokusho kwesitatimende esithunyelwe yiSharks, uSean Everitt uzoqhubeka abe ngumqeqeshi weqembu elikhulu kodwa uPowell uyena ozoba ngumqondisi jikelele wombhoxo.
Isikhulu esiphezulu seSharks, u-Eduard Coetzee, sizwakalise ukujabula kakhulu ngokuthola umqeqeshi osezingeni eliphezulu njengoPowell.
“UNeil ungumuntu omangalisayo futhi izinto asezenzile kwiBlitzboks zinkulu kakhulu. Ufike wafaka ukusebenza kanzima nosiko olucacile kwiBlitzboks lapho ukuzinikela nenhlonipho kuhamba phambili,” kusho uCoetzee.
“Njengomqondisi webhola lombhoxo kwiSharks, uNeil uzobheka yonke into eyenzekayo enkundleni aphinde eseke abaqeqeshi abehlukene esisebenza nabo.
“USean Everitt uzoqhubeka nokuba ngumqeqeshi weqembu elikhulu futhi uzozuza lukhulu kumava, ukwesekwa nokuholwa uNeil nakho konke azifika nakho akwethule eqenjini ukuqinisekisa ukuthi iyabonakala imiphumela enkundleni.”
Akungabazeki ukuthi iSouth African Rugby Union (Saru) izogqemeka engeqiwa ntwala ngokushiya kukaPowell kwiBlitzboks, lapho ingangatshazwa khona impumelelo yakhe.
FUNDA NALA: UMcCarthy usole ubuvaka kubadlali boSuthu behlulwa yiRaja
Lo mqeqeshi uthe uyakujabulela ukuthola inselelo entsha ngemuva kokuhlala isikhathi eside eqenjini lesizwe lamaSevens.
“Ngemuva kokuhlala iminyaka eyisishiyagalolunye kwiBlitzboks, lena yinselelo entsha kimi nethuba eliyingqayizivele enginikwa lona, futhi ngiyalemukela,” kusho uPowell.
“ISharks iyinkampani enkulu kakhulu futhi ngikubheke ngabomvu ukusebenza nababantu abafana no-Ed noSean, abavele sebazi ukuthi yikuphi lapho befuna ukulisa khona iqembu.
“Uma ngingafaka isandla nami kulokho ngingajabulakakhulu.” KwiSharks uPowell uzofica umdlali uWerner Kok asebenze naye isikhathi eside kwiBlitzboks bedla izindebe.
Previous Previous post: Usola ubuvaka kuMaZulu uMcCarthy ngokushaywa kwabo yiRaja
Next Next post: Umengameli weSafa usengenele ikhwelo lokubuyela ezinkundleni